नेपाल आज | गायक अर्पणराजसँग रमाइलो गफः सानैमा प्रेम गरेँ, तर धोका दिएको त छैन (भिडियो)
गायक अर्पणराजसँग रमाइलो गफः सानैमा प्रेम गरेँ, तर धोका दिएको त छैन (भिडियो)
सोमबार, २४ बैशाख २०७५ गते प्रकाशित - प्रताव ओली
काठमाडौं । लोक तथा दोहोरी गायक अर्पणराज गिरी यतिवेला स्टेज कार्यक्रमहरूमा निकै व्यस्त छन् । ‘सगरको पानी नुनिलो’ गीतमार्फत बिन्धवासिनी अवार्ड पाएका गिरी अहिले नयाँ गीतको तयारीमा जुटेका छन् ।
वि.स. २०४९ साल कार्तिक १८ गते बाग्लुङको जैदी गाविसमा जन्मेका उनी एस.एल.सी पछि बाग्लुङको मिडियामा काम गरे । सानैदेखि दोहोरी गायनमा गहिरो रुची राख्ने हुनाले वि.स. २०६७ सालमा काठमाडौ आएर मेहेनत गर्न थाले । वि.स २०६९ सालदेखि औपचारिक रूपमा गायन क्षेत्रमा प्रवेश गरेका उनी सञ्चार क्षेत्रमा पनि सक्रिय छन् ।
(लोकदोहोरी गायक अर्पणराज गिरीसँग उनको जीवनशैलीबारे नेपाल आजले गरेको रमाइलो कुराकानी)
म रुममा एक्लो छु । फुर्सद पनि कम हुन्छ । खाना खानपनि ढिलो नै हुने हुनाले प्रायःजसो खाना बाहिर नै खाने गर्दछु । कहिलेकाहीँ साथीहरूको निमन्त्रणा हुन्छ । त्यतिवेला भने साथीहरूसँगै खाने गर्दछु ।मलाई खानामा भने सामान्य दाल भात नै मनपर्छ ।
पोशाकमा मलाई तडकभडक गर्न मन पर्दैन । विशेषगरी जिन्सको पाइन्ट र सामान्य कपडाहरू मात्र लगाउँछु ।
विदेशतिरको यात्रा गरेको छैन । नेपालको २०–२२ वटा जिल्ला घुमेको छु । घुमेको पर्यटकीय स्थानहरूमध्ये पोखरा अलि विशेष लाग्छ । इलाम र मुस्ताङ जाने रहर छ ।
स्कुले जीवनमा एकपल्ट प्रेममा परेँ । तर त्यो प्रेम त्यतिकै छुट्यो । अहिले प्रेममा परेको छैन । आफ्नै काममा इन्जोय गर्ने हुनाले प्रेम सम्बन्धतिर खासै मतलब छैन । सानोमा एकपल्ट प्रेम गरे । तर आजसम्म कसैलाई धोका दिएको छैन ।
कहिलेकाहीँ नजानेर सामान्य भूलहरू हुनसक्छ । केही साना भूलहरू गरे पनि हुँला । तर जानेर अहिलेसम्म ठूलो भूल त्यस्तो केही गरेको छैन ।
म ड्रिङ्स गर्छु । प्रायः साथीभाइको मन राखिदिनको लागिमात्र पिउँछु । कहिलेकाहीँ खुसी हुँदा पिउँछु । तर त्यसरी लत भने बसेको छैन ।
गीत सगिंतमै जीवन विताउने सोच छ । धेरै कमाउने, विदेश जानेजस्ता त्यस्तो ठुलो सपनाभने केही देखेको छैन ।
मलाई मृत्युदेखि डर लाग्दैन । सानैदेखि म समस्याहरूको सामना गर्ने हुनाले तनाब हुँदा मरिहालुँ जस्तो पनि लाग्दैन । जगंली जनावरहरूसँग डर लाग्दैन । तर सर्पसँग भने अलिअलि डर लाग्छ । दुःख पर्दा कहिल्यै रोएको पनि छैन ।
अर्पणराज गिरी गायक
नेपाली युवकसँग लगनगाँठो कस्दै श्रद्धा कपुर